« Pour une mère, un enfant a beau grandir, il s’arrête à la hauteur du cœur »
Samy nahitana masoandro na ny Ray na ny Reny. Ireo no mandrafitra ny maha-olona ny olona hatramin’ny fahakeliny ka mandra-pahalehibe azy.
Le bonheur est né de l’altruisme et le malheur de l’égoïsme (Bouddha)
Samy mandeha samy mitady ! Izany no fiainana amin’izao fotoana izao. Samy mifofotra mitady izay ho hasambarany sy ho fifaliany, ka zary lasa tsy mifampitsinjo intsony.
Miara-miaiky ny rehetra ankehitriny fa miovaova be ihany ny toetr’andro : ny ririnina toa manoram-be, ny lohataona toa mangatsiaka, ny orana zara raha milatsaka…
«Quand on apprécie les qualités de quelqu’un, on l’admire. Quand on accepte ses défauts, on l’aime»
Tsy ny 14 Febroary ihany no andron’ny mpifankatia fa ho an’ireo tena mifankatia dia afaka mihanoka izany isan’andro, amin’ny endriny sy fomba isa-karazany.
Le bonheur est parfois caché dans l’inconnu (Victor Hugo)
Tahotra iraisan’ny olon-drehetra ny tahotra ny zavatra tsy fantatra. Rehefa olona mbola tsy hita, toerana mbola tsy naleha, tranga mbola tsy niainana mihitsy, dia miteraka ahiahy any am-parahatoka any foana, na kely monja aza.
Isan’ny fahaizana ilaina lalandava ao an-tokantrano ny fahaizana mahandro, na ho an’ny vavy na ho an’ny lahy. Ny sakafo haroso an-databatra sy karakaraina mantsy no isan’ny mampivondrona ny ankohonana,
Toa heverina fa tompon’antoka amin’ny fahasambaran’ny tena ilay vady, hany ka lasa mora kely ny mandiso azy, raha sendra misy alahelo na hatezerana mahazo. Tsia anefa ! Tsy azonao ankinina amin’ny hafa, na iza izy na iza, ny hasambaranao, fa ianao dia ianao ihany no tompon’andraikitra voalohany amin’izany. Ny fanapahan-kevitra raisinao sy ny fahaizanao mijery hatrany ny lafitsaran’ny fiainana no iankinan’ny fahasambaranao. Fanampiny fotsiny ny fisian’ny vady, ny olon-tiana, na ny olon-kafa eo anilanao. Rehefa hainao rahateo ny sambatra irery, dia hiankin-doha amin’ny hafa ianao. Ho voasoroka kokoa amin’izay ny fahadisoam-panantenana.